El Al Israel ụgbọ elu na-amalite ụgbọ elu ụgbọelu na Casablanca na Marrakesh
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Israel Na -agbasa Akụkọ » El Al Israel ụgbọ elu na-amalite ụgbọ elu ụgbọelu na Casablanca na Marrakesh
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Israel Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mwepụta ụzọ nke El Al na-aga Morocco na-agbaso nkwekọrịta nkwekọrịta nke abịanyere aka n'etiti mba abụọ na Disemba 2020.
El Al na-efega Morocco taa.
Israir ga-amalite ụgbọ elu kwụ ọtọ n’etiti Tel Aviv na Marrakesh na July 25.
Arkia ga-ebido ọrụ site na Tel Aviv ruo Marrakesh na August 3
Onye ụgbọ elu ụgbọelu Israel bụ El Al Israel Airlines kwupụtara taa mwepụta ụzọ ụgbọ elu abụọ na-aga Morocco, nke mbụ ụdị ha n'etiti mba abụọ ahụ.
Ọrụ El Al-Israel-Morocco ga-amalite na July 25.
El Al Israel ụgbọ elu ga-eme ụgbọ elu n'etiti Israel Ọdụ ụgbọ elu Ben Gurion International na obodo Moroccan nke Casablanca na Marrakesh.
Linelọ ọrụ ụgbọ elu ahụ kwuru na ụgbọ elu na-aga Morocco ga-ewe ihe dị ka awa ise na ntụziaka ọ bụla.
"Morocco na-enye mmeri mmeri nke oke ala ọmarịcha obodo, obodo ndị mere eme, nnukwu ụlọ, ụlọ ahịa mara mma, ezigbo nri na nnabata ọbịa."
Nakwa na July 25, ụgbọ elu nke abụọ kachasị na Israel Israir ga-amalite njem ụgbọelu kpọmkwem n'etiti Tel Aviv na Marrakesh. Gbọ elu nke atọ nke Israel bụ Arkia ga-ebido otu ụzọ ahụ n'August 3.